အတတ်ပညာ တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်လေးခု R4 သစ်အချောထည်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ |JCUT
1. လုပ်ငန်းစဉ်လေးရပ် အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် အဖွင့်စက်သည် သုံးစွဲသူများအတွက် ထိရောက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ဦးခေါင်းလေးလုံးကို ဆလင်ဒါများဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားပြီး နိုင်ထက်စီးနင်း ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် သုံးစွဲသူမှ ရေးဆွဲထားသော ပရိုဂရမ်ပေါင်းများစွာကို လွယ်ကူစွာ အပြီးသတ်နိုင်သည် (လုပ်ငန်းစဥ်လုပ်ငန်းခွင်များသည် ကိရိယာ 2-4 ခုအတွင်း ကိရိယာပြောင်းလဲမှု လိုအပ်သည်)၊ အလယ်တွင် ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသော လက်စွဲဓားပြောင်းလဲမှုကို သက်သာစေပြီး ၎င်းသည် သစ်သားတံခါးများ၊ ပရိဘောဂများနှင့် ဂီတတူရိယာများ ထုတ်လုပ်မှုတွင် လုပ်ငန်းစဉ်ပေါင်းစုံ ထုတ်ကုန်များအတွက် သင့်လျော်သည်။ဤစက်ပစ္စည်းတွင် ခေါင်းတစ်လုံးတည်း သစ်သားထွင်းစက်သုံးလုံး၊ ခေါင်းနှစ်လုံး သို့မဟုတ် သုံးခေါင်းသီးခြား လွတ်လပ်သော သစ်သားထွင်းစက်နှင့် ဘက်စုံသုံး သစ်သားထွင်းထုစက်များ၏ စီမံဆောင်ရွက်မှု ထိရောက်မှုနှင့်အတူ ထိပ်တန်းသုံးချောင်းပါရှိသည်။
2. Intelligent ထိန်းချုပ်မှု- စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ပေါင်းစပ်စက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် (ရိုးရှင်းသောဘုတ်အဖွဲ့ + ကွန်ပျူတာမဟုတ်ပါ)၊ breakpoint၊ power-off နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ထွင်းထုခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များ ပါရှိပြီး မူလအမှတ်သို့ ပြန်သွားရန် အလိုအလျောက် အမှားပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက် တိကျမှုကို ထိရောက်စွာ အာမခံပါသည်။ နာရီပတ်ပတ်လည်အလုပ်လုပ်;မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ထိရောက်မှုမြင့်မားသော U disk လည်ပတ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ရိုးရှင်းပြီး သင်ယူရလွယ်ကူသောကြောင့် သုံးစွဲသူများသည် စက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကို လျင်မြန်ပြီး လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
3. လူသားဆန်သော ဒီဇိုင်း- ပြုပြင်ဆဲအကွာအဝေးထက်ကျော်လွန်သော ဒီဇိုင်းပုံစံ အပြင်အဆင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုက်မိမှုမှ ကာကွယ်ရန် အသိဉာဏ်ရှိသော နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်၊ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော လုပ်ဆောင်မှုအမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု- လုပ်ငန်းစဉ်အမြန်နှုန်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်၊ လုပ်ငန်းစဉ်၏ထိရောက်မှုကို အမှန်တကယ်တိုးတက်စေကာ၊ ကိရိယာ၏သက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးစေပြီး အထွက်နှုန်းကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။လုပ်ငန်းစဉ်လေးခု blanking စက်၊ လေးဆင့် blanking စက်၏ အားသာချက်များ၊ CNC blanking စက်
4. ထူးခြားသောစက်မှုဒီဇိုင်း- မည်သည့်ဗိုင်းလိပ်တံကိုမဆို အလုပ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ပစ္စည်းများကို ထင်သလိုလုပ်ဆောင်ရန် လေစုပ်စက် သို့မဟုတ် ဝက်အူဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်သည်။ကိရိယာဆက်တင်သည် တိကျသည်၊ မြင့်မားသည်၊ နှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည် မြင့်မားသည်။
5. ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပံ့ပိုးမှုလုပ်ဆောင်ချက်- အဆင့်မြင့်ဂဏန်းသုံးလုံးမျဉ်းကွေးခန့်မှန်းခြင်းဆိုင်ရာ အယ်လဂိုရီသမ်၊ တည်ငြိမ်သော polyline၊ မျဉ်းကွေးလည်ပတ်မှု၏ အမြန်နှုန်းနှင့် တိကျမှုကို သေချာစေနိုင်သည်။အဆင့်မြင့်ဖိုင်ကြိုတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် သုံးစွဲသူများအား ဖိုင်များလုပ်ဆောင်ရာတွင် အမှားအယွင်းများကို အချိန်မီပြုပြင်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပြီး ဆော့ဖ်ဝဲလ်အမျိုးမျိုးမှထုတ်လုပ်ထားသော ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ စီမံကုဒ်များ (ဥပမာ MasterCAM၊ Type3၊ UG၊ AutoCAD၊ ArtCAM၊ Proe၊ Jingdiao ကဲ့သို့ ကောင်းမွန်သောသဟဇာတဖြစ်စေနိုင်သည်။ စသည်ဖြင့်)။
သစ်သားတံခါးနှင့် ပရိဘောဂအလှဆင်လုပ်ငန်း- အစိုင်အခဲသစ်သားနှင့် ပေါင်းစပ်တံခါး၊ ကက်ဘိနက်တံခါး၊ ဧရိယာကျယ်ဝန်းသော ပန်းကန်ပြားလေယာဉ်ထွင်းခြင်း၊ အစိုင်အခဲသစ်သားထွင်းထုခြင်းနှင့် ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ဘောင်ပရိဘောဂထွင်းခြင်း၊ ရှေးဟောင်းမဟော်ဂနီ ပရိဘောဂထွင်းခြင်း၊ အစိုင်အခဲသစ်သားအနုပညာ နံရံဆေးရေးပန်းချီနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ။
အလုပ်ဧရိယာ (S*Y*Z) 1300*2500*200mm
သစ်သားဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ထွင်းထုခြင်းအတွက် အထူးချည်မျှင် GDZ Air Cooling Spindle 6KW*1+3.5KW*3
မော်တော် Leadshine 758s ဆာဗာမော်တာ
ထိန်းချုပ်မှုစနစ် ShanLong L1000 ထိန်းချုပ်မှုစနစ်
ဖုန်စုပ်စက် 5.5KW / 380V စွမ်းအားမြင့် ဖုန်စုပ်စက်
Vaccum Pump 7.5KW/380V စုပ်ယူနိုင်သော ပန့်
ဒရိုက်ဘာ ကိုက်ညီသော servo မော်တာမောင်းသူ
ကူးစက်ခြင်း X,Y တင်သွင်းသည့် 25 rack drive;Z တင်သွင်းသည့် ထိုင်ဝမ် TBI Ball Screw Drive
အင်ဗာတာ။ Hpmont 7.5kw
ဂီယာမလာဘူး။ မူရင်း 25 စတုရန်းမိုင်စစ်စစ်
ကန့်သတ် သစ်သားဖြတ်တောက်ခြင်း router ၏သီးသန့်ကန့်သတ်ချက်
တစ်ပွဲ 1.5M ထိန်သိမ်း
ဘောလုံးဝက်အူ TBI မူရင်းတင်သွင်းသော Ball ဝက်အူ
ဆလင်ဒါ ဆလင်ဒါတင်သွင်းခြင်း (အရည်အသွေးကောင်းပြီး ခိုင်ခံ့သောကြာရှည်ခံမှု)
Spindle မြန်နှုန်း 0-24000/မိနစ်
လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်လည်ပတ်ရေးကက်ဘိနက် အပြည့်အ၀ အလုံပိတ် intelligent operation cabinet
Tool ဆက်တင်နည်းလမ်း အလိုအလျောက်ကိရိယာဆက်တင်
အလိုအလျောက် ဖြုတ်ချခြင်း။ အလိုအလျောက် လွှင့်တင်ခြင်း၊ ပြီးသွားသော ထုတ်ကုန်ကို အလိုအလျောက် တွန်းထုတ်ခြင်း၊ တွန်းတင်ပြီး ဒုတိယဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထည့်သွင်းပါ။
စက်ဖွဲ့စည်းပုံ အရှည် 3.5 မီတာ လေးလံသော အကြမ်းခံ ဂဟေဆက်ထားသော အိပ်ယာ၊ စတီးဂရန်ထရီ
ဗို့အား 380V3အဆင့်
အသားတင်အလေးချိန် 2500 ကီလိုဂရမ်
စုစုပေါင်းအလေးချိန် 2600 ကီလိုဂရမ်
သစ်သားသေတ္တာ ကျွန်ုပ်တို့သည် Standard Export Wooden Box ကို ပေးဆောင်ပါသည်။
Control Box ၊ အမှီအခိုကင်းသော အလွှာနှစ်ထပ် Control Box
ရွေးချယ်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများ CD ရှိ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးကတ် (PCI ကတ်)၊ ထွင်းထုခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း ကိရိယာများ၊ Allen သော့များ၊ Collet သော့ခတ်အတွက် လက်ကိုင်တုတ်များ၊ ဒေတာဝိုင်ယာ၊ ပါဝါလိုင်း၊ ဘရပ်ရှ်၊ Spanner နှင့် ကလစ်များ။(ဤကိရိယာများအားလုံး သင့်အတွက် အခမဲ့ဖြစ်သည်)
ယခင်- ဒီဇိုင်းအသစ် spindle ATC သစ်သား cnc router လေးခု
နောက်တစ်ခု: ATC သစ်သား cnc 1325
တရုတ် 1325 Cnc Router Atc စက်ရုံ
China Cnc Wood Router Table စျေးနှုန်းစာရင်း